သူဌေးတွေက ဘယ်တော့မှ ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်တွေ၊ ဇာတ်လမ်းတွေကြည့်ပြီး အချိန်ကုန် မခံကြပါဘူး။
တီဗွီကြည့်မယ့်အစား စာအုပ်တွေပဲ ဖတ်နေလေ့ရှိပါတယ်။
Elon Musk ကနေ Warren Buffett အထိ နာမည်ကျော် လုပ်ငန်းရှင် သူဌေးတွေ အားလုံးဟာ တစ်နေ့တာရဲ့ အချိန်တော်တော်များများကို စာဖတ်ခြင်းဖြင့် ကုန်ဆုံးတတ်ကြပါတယ်။
စာဖတ်တဲ့နေရာမှာလဲ အပျော်ဖတ် စာပေတွေထက် ပညာရမယ့်၊ တိုးတက်မှု တစ်စုံတစ်​ရာ ရရှိနိုင်မယ့် စာအုပ် စာပေတွေကိုပဲ ဖတ်လေ့ရှိပါတယ်။
ဘယ်တော့မှ တစ်ဦးတည်း သီးခြားခွဲထွက် မနေပါနဲ့
သူဌေးတွေအားလုံးက လူမှုဆက်ဆံရေး ကောင်းကြသူတွေချည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ဟာ အမြဲတမ်းလိုလို မိတ်ဆွေသစ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီး စကားစမြည် ပြောနေလေ့ရှိပါတယ်။
ဒီလို လူမှုဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်တာဟာ အောင်မြင်မှုရဲ့ သော့ချက်ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို သူတို့တွေက သေချာသိရှိထားကြပြီး သူတို့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်ကို တိုးချဲ့နိုင်ဖို့ အားထည့်ထားကြပါတယ်​။
အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းဟာ သူတို့ရဲ့ ပင်ကိုယ် သိစိတ်ကို ယုံကြည်စွာ အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး အများကြီး လျှောက်တွေးလေ့ မရှိပါဘူး။
ဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုတွေနဲ့ အချိန်ကုန် မခံတာမျိုးကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ဆောင်ရမယ့် အရာတွေကို သေချာ ဆင်ခြင် သုံးသပ်ပြီးပြီ ဆိုတာနဲ့ လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြီး လုပ်စရာရှိတာတွေကို စတင်လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ ဘယ်တော့မှ နောက်ပြန် လှည့်ကြည့်လေ့ မရှိပါဘူး။
တစ်ကယ်ရင်ဆိုင်​မကြည့်​ပဲ အရှုံး မပေးပါနဲ့
သူဌေးတွေအားလုံးဟာ ဒုက္ခရောက်လာချိန်မှာ ဘယ်တော့မှ အရှုံးပေးဖို့ မစဉ်းစားတတ်ကြပါဘူး။
ကျရှုံးမှုတွေ အဆင်မပြေမှုတွေ အားလုံးကို ဇွဲရှိရှိနဲ့ ကျော်ဖြတ်ကြပါတယ်။
လုပ်ငန်းရှင်အများစုဟာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ မိတ်ဆွေ၊ မိသားစုဝင်တွေရဲ့ ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုတွေကို ခံရလေ့ရှိပေမယ့် လက်မလျှော့တတ်ကြ ပါဘူး။
အောင်မြင်သူအစစ်တွေက ဘယ်တော့မှ နောက်ကောက်ကျ ကျန်မ​နေခဲ့ပါဘူး။
ချမ်းသာ အောင်မြင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းဟာ မန​က်ခင်းမှာ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တတ်ကြပါတယ်။
သူတို့အတွက် မနက်ခင်း လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာဟာ နေ့စဉ် လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ အတွက် အာရုံစူးစိုက်နိုင်ပြီး၊ လုပ်ငန်းပြီးမြောက်မှုကို တိုးတက်လာစေဖို့ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိတယ်ဆိုတာကို နားလည်ကြပါတယ်။
အောင်မြင်တဲ့သူ အများစုဟာ မနက်စောစော အိပ်ရာထတတ်ကြသူတွေချည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ဟာ ဘယ်တော့မှ အိပ်ရာထဲမှာ ကွေးနေပြီး အလုပ်နောက်ကျခံတဲ့ အထဲမှာ မပါကြပါဘူး။
အောင်မြင်သူ အများစုဟာ သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လေ့လာစရာ အခွင့်အလမ်း​တွေ အမြဲတမ်းရှိနေတာကိုသ်ိကြတဲ့အတွက် ပျင်းနေတယ် ဆိုတာ မရှိပါဘူး။
ထိုင်ပြီး ပျင်းနေမယ့်အစား မိတ်ဆွေသစ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့၊သင်တန်းတွေ တက်ဖို့၊ စာအုပ်တွေဖတ်ဖို့ စသဖြင့် အရည်အချင်းနဲ့ အသိပညာ ဗဟုသုတတွေ တိုးလာဖို့ကိုပဲ အမြဲ အားထုတ်နေတတ်ကြပါတယ်။
Credit : Gentleman Magazine။
rich man tips
အောင်မြင်မှုကို ဟန့်တားနေသည့် ဆင်ခြေများ
လူက သခင်လား? နည်းပညာက သခင်လား?
စာသင်နေစဉ်အတွင်း ကျောင်းသားတွေ ဂနာမငြိမ် ဖြစ်နေပြီလား
ငယ်ငယ်ကခေါင်းမာတဲ့ကလေးတွေဟာ ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာ အောင်မြင်သူတွေဖြစ်လာကြောင်းတွေ့ရှိ
အခွင့်အရေးတွေ ဘယ်သူကြောင့် ဆုံးရှုံးတာလဲ?
STARS SPECIAL EDUCATION CENTRE